Tanjombato : Tratra ihany ilay vehivavy nanondraka asidra polisy
Naiditra am-ponja omaly ilay vehivavy izay nanondraka asidra ilay polisy vadiny teny Tanjombato, ny 17 febroary.
Tany Ambatondrazaka vao voasambotra ity vehivavy ity, ny alatsinainy teo.
Fifandirana vokatry ny olana tao an-tokantrano no nitarika ity fanondrahana asidra ity. Voa mafy tamin’izany ny ilany havia tamin’ny vatan’ilay polisy sy ny lohany. Nametraka fitoriana teny anivon’ny polisy teny Tanjombato ilay niharam-boina.
« Tamin’io andro io ihany dia nosamborina ilay ramatoa ary tafatsoaka, ny 18 febroary rehefa noentina teny amin’ny fitsarana », hoy ny fanazavana avy amin’ny polisy.
« Fampitam-baovao tamin’olon-tsotra no nahalalana fa tany Ambatondrazaka izy. Voatery nidina tany ny polisy avy eny amin’ny kaomisarian’i Tanjombato nisambotra azy », hoy ihany ny loharanom-baovao.
Araka ny fantatra dia vesatra roa no miandry ity vehivavy ity amin’ny fotoam-pitsarana azy. Eo aloha voalohany indrindra ilay fanondrahana asidra ny vadiny ; fa eo ihany koa ilay fandosirana ny Fitsarana.
Taorian’ity tranga ity dia nisaraka tanteraka ilay polisy sy ity vehivavy ity, izay vao 28 taona monja. Voalazan’ny polisy fa « tsy nandà ny helony io vehivavy voampanga io, nandritra ny famotorana azy ».